अनियमिताको अखडा बन्दै नेविप्रा : छाती ठोकेर भन्छन् शिवाकोटी - Jalasrot.com
‘Dont look at the messenger, look at the message’
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बारेमा लगातार आन्तरिक रुपबाट नै आवाज उठिरहेकाछन् । नेविप्रा माथि यस्ता आरोपहरु लाग्नु आफैमा राम्रो सन्देश हुँदै होइन । हामी नेविप्रा भित्र छचल्किएका केही आरोपहरुको यो श्रृङ्खलामा चर्चा गर्ने छौ ।
आरोप नं. १ मा कुल कर्मचारी संख्यामध्ये केही कर्मचारी युनियनको नाममा हाजिर गरेर तलब र प्रोत्साहन भत्ता बुझिरहेका छन् । केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका एक हजार कर्मचारीमध्ये ३०० सयले मात्र काम गर्ने गरेका छन् । बाँकी ७०० को काम भनेको हाजिर गरेर पार्टीको राजनीति गर्ने नै हो । यसरी स्थायी कर्मचारी युनियनमा लागेका कारण त्यसको परिपूर्तिमा ३ हजार कर्मचारी ज्यालादारी र करिब २ हजार कर्मचारी एजेन्सीमार्फत करारका रहेका छन् । नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबमान १७,५००। का दरले ती कर्मचारीको भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । युनियनको इकाइ, प्रदेश, केन्द्रमा कृयाशिल सबै गरि काम नगर्ने प्रवृति यो राम्रो भएको देखिएन ।
आरोप नं. २ युनियनको दादागिरि–ठूलो कन्ट्याकमा कमिसन असुल्ने, लेखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखबाट मासिक लेवि उठाउने । कर्मचारी सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप गर्ने । व्यवस्थापन र प्रशासनमा दवदवा कायम गरेर स्वार्थ सिद्ध गर्ने । आम कर्मचारी र संस्थाको हितमा काम नगर्ने प्रवृति छ ।
आरोप नंं ३ माटो ढुंगा तथा कंक्रिट प्रयोगशाला विभाग अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता विगत ४ वर्ष देखि केन्द्रका कर्मचारीलाई दिने गरिएको छ । यस कार्यालयले दिने प्रोत्साहन भत्ताको ६५ प्रतिशत लेखा, प्रशासन र इन्जिनियरिङ विभागका पहुँचवालालाई दिइने गरेको छ । एमडी सचिवालयको सवारी चालक कोष र सामान्य सेवा विभागको पहुचवालासम्म त्यो रकम जाने गरेको छ । भत्ताको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको नियत प्रष्ट छ । त्यसको असर छ महिनामा सकिने काम दुई वर्षमासमेत सकिएको छैन । यो सिधैं अनियमिता र थप व्ययभार हो । यस विभागका प्रमुख अनिरुद्र पौडेल हुनुहुन्छ । यसमा उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता छ जुन ठूलो कमजोरी हो ।
आरोप नं. ४ प्रत्यक्ष ५ करोड र अप्रत्यक्ष रुपमा ५ करोड गरि दैनिक १० करोड घाटा छ । यसरी घाटा हुनमा विकृति तथा निजी उत्पादकसँग डलरमा पिपिए र टेक अर पे मुख्य कारण हुन । यस विषयमा सिवाकोटीको माग के छ भने– यो प्रणालीमा सुधार हुनुपर्छ । माग पुरा नहुनु र गर्न नसक्नु भनेको पनि सिम्पल छ सुधार गर्ने मनसाय, क्षमता वा नियत नहुनु हो । साधारण तर गम्भीर कुरा के हो भने सिवाकोटी आवद्ध संघको अध्यक्ष जर्नादन भट्टराईले हस्ताक्षर गरि असार ३ गते विद्यानको दफा १४ प्रयोग गरेर साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि सिवाकोटीलाई निष्काशन गरिएको छ । यो उनीलाई संझाउन वा चुप लगाउन के हो ? उनको भनाइ के छ भने यो गर्नमा भट्टराईलाई व्यवस्थापनले इशारा गरेको उनको बुझाइ रहेको छ । सानो तह वा एक्लो मान्छेले उठाएको आवाज दवाउने, हेप्ने यहाँ भित्र यस्तै नियम छ । संघको निर्वाचित सदस्यलाई निष्काशन गर्ने प्रकृया गतल छ । संघले नेविप्राकाे सुधारका लागि आवाज उठाउनु पर्ने उनको धारणा छ ।
यतिबेला दिनेश शिवाकोटी नेविप्रा बचाउ अभियानका लागि लागिरहका छन् । नेविप्राको भ्रष्टाचार मिलेमतोमा भएको कुरा आन्तरिक हो । यसलाई बाहिर ल्याएको हुनाले स्पष्टिकरण सोध्ने काम पनि व्यवस्थापन, प्रशासनबाट भएको छ । शिवाकोटीको च्यालेन्ज छ कि मेरो दावी गलत भए कारवाही भागिदार बन्ने र सजाए भुक्तान गर्ने छु । यति अडानका साथ किन अगाडि बढिरहेका छन् त ? जागिर नै धरापमा पारेर । नेविप्रामा यस्तै छ । उनले एमडीलाई आरोप गलत भए राजिनामा नै दिने व्यहोराको पत्रसमेत बुझाएका छन् । सायद समाचार आएमा थप कारवाही हुनेछ । तर म नेविप्राको सुधारका लागि चुप लागेर बस्दिन उनको भनाइ छ ।
उनीसँग नेविप्रामा २३ वर्ष काम गरेको अनुभव छ । यति लामो समय काम गरेको व्यक्तिले उठाएका संस्थाको हितका कुरामा समाधान खोज्ने वा नखोज्ने ? यो प्रश्न आफैमा गम्भीर प्रश्न हो । उनले प्रष्ट रुपमा भनेको छन् कि गलत कुराको सुधार हुनुपर्यो हैन भने मैले उठाएका कुरा गलत सावित गरेर मलाई कारवाही गर्नु पर्यो । यो के गर्ने व्यवस्थापन पक्षको हातमा छ ।
निर्वाचित सदस्य भनेको संघको प्रतिनिधि भएको हुनाले उसले बोलेको कुरा आधिकारीक धारणा हुन्छ । उनले संस्थामाथि लगाएको आरोप गलत भएको खण्डमा खण्डन र कारवाही हुनु पर्ने हो । नत्र यो कुरा स्पष्ट छ कि नेविप्राभित्र चरम अनियमिता, भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसो त नेविप्राको अध्यक्षमा उर्जा मन्त्री तथा सदस्यमा उर्जा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत हुनुहुन्छ । यस विषयमा उहाँहरुको पनि ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
( अक्रमबाट कुराकानीकाे आधारमा )